၄လ ၁ရက်နေ့ကနေ ရန်ကုန်မှာ မီတာစနစ် တက္ကစီ စတင်မည်! | Myanmar Tech Press
နည်းပညာဆိုင်ရာ application များ နည်းပညာအသုံးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ
၄လ ၁ရက်နေ့ကနေ ရန်ကုန်မှာ မီတာစနစ် တက္ကစီ စတင်မည်!
2018-03-30 admin Grab, Uber, Taxi
UBERရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှလုပ်ငန်းကို Grab ကဝယ်ယူလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကထွက်ပေါ်လာပြီး Grabရဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး သုံးစွဲသူများလျော့ကျနိုင်တယ် ဆိုတဲ့စိုးငြိမ်အသံများလည်းထွက်ပေါ်လာတယ်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်ကိုရောက်လာပြီးတော့ မီတာစနစ်တက္ကစီများလည်း ရောက်လာမယ်လို့ကြေငြာထားပါတယ်။ထိုသို့ဝန်ဆောင်မှုစတင်မှာကတော့ ၂၀၁၈ခုနှစ် ၄လပိုင်း၁ရက်နေ့မှဖြစ်ပါတယ်။
စတင်စီးတဲ့အခါမှာတော့ ၁၃၀၀ကျပ် နဲ့ ၁ကီလိုမှာ ၃၀ကျပ်လောက်နဲ့တွက်ပါတယ်။ဥပမာ စာကူလာတာဝါး ကနေ ့မြန်မာပလာဇာထိ ၅.၉ကီလိုကို ၃၁၀၀ကျပ်နဲ့ တန်ပါတယ်။ကားကြပ်မှုနဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့အတွက် စောင့်နေရတဲ့့အချိန်တွေကိုထည့်အတွက်ဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကို [ကီလိုမီတာတက္ကစီ]ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ကြေငြာပါတယ်။
၃လပိုင်း ဒုယပတ်လောက်ကနေ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို စမ်းသက်မှုများစတင်နေပြီး ၄လ ၁ရက်နေ့ကနေ စပြီးတော့ တက္ကစီ ၁၅၀စီးလောက်ကို [ကီလိုမီတာ] ဆိုတဲ့ စတစ်ကားများကိုလိုက်ကပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုများစတင်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
Driver ရဲ့ Register မှာတော့ National Register, Family register certificate, Certificate of Vehicle Tax, Copy of driver’s license တို့လိုအပ်ပြီး စီနင်သူ၏လုံးခြုံရေးကိုစိတ်ချရဖို့အတွက် ကြီးကြပ်ထားပါတယ်။(Register လုပ်ခြင်းကို Grab မှာလည်းသေချာမှတ်ထားပါတယ်။)
Driver တို့ကားအခြေအနေကို မှတ်ထားဖို့အတွက်ကားစစ်ဆေးခြင်းတို့ Driver အတွက်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားဆိုတာကတော့ အခုထိမကြေငြာသေးဘူး။
နည်းစနစ်ကိုယူလာပြီး တိုးတက်လာတဲ့ Grab ရဲ့အရှိန်ကိုရပ်လို့ရမလား ဒါမှမဟုတ်ရပ်လို့မရနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ကျွန်တော်သည်လည်း Grab user တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့စျေးစစ်စရာမလို နေရာကိုပြောပြနေစရာမလိုတာရယ်၊ လုံခြံုမှုစိတ်ချရခြင်း ဒီ၂ချက်ကတော့အဓိကကျပါတယ်။
သို့သော်လည်းတစ်ခြားသော ဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်။ကြားရက်တွေမှာ တက္ကစီရောက်လာဖို့အတွက် ၅မိနစ်ကျော်စောင့်ခဲ့ရတဲ့အခါလည်း တစ်ခါတစ်လေရှိပါတယ်။ပုံမှန် အားဖြင့် အဲယားကွန်းဖွင့်ကြပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ညစ်တဲ့ တက္ကစီများလည်းရှိတဲ့အတွက် အဲ့အခါတော့ သည်းခံဖို့တော့လိုပါတယ်။
ကီလိုမီတာ တက္ကစီကကားနဲ့မောင်နှင်သူရဲ့အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းရင်း ကားစီရေကတိုးလာတာနဲ့အမျှ စီးနင်သူစောင့်ဆိုင်းရခြင်းကိုလျှော့ကျသွားပြီး Grabရဲ့ သုံးစွဲမှုကိုကျော် သွားနိုင်ပါတယ်။ Grab driver အနေနဲ့လည်း Promotion ရှိပေမဲ့လည်း 15% ကိုပေးအပ်ရမှာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါကလည်း မနည်းလှပေ။
Driver နဲ့စီးနင်သူ ၂ဖတ်စလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံနေခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက် အခွင့်ကောင်းတော့ ရှိနေအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
[ကီလိုမီတာ]ရဲ့ Logo ကိုကပ်ထားတဲ့ Taxi ကမြို့တွင်းမှာများနေမလား ဒါမှမဟုတ် အစိမ်းရောင်မျက် နှာပြင်များပါရှိသည့် ဖုန်းများကိုကြည့်နေသည့် driver များလားမလားဆိုတာကိုတော့ နောက်၃လမှာတော့ ယခုနှင့်မတူသည့်လှုပ်ရှားမှုများရှိလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Guest writer: Katsuragawa Yuki
← MPT ၏ မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်း အသစ်များနှင့် မိုးဘိုင်းဂိမ်း အက်ပလီကေးရှင်း အသစ်များအကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း
UBERက Grab ကိုအရှေ့တောင်အာရှာလုပ်ငန်းရောင်းချခြင်းကို စီမံနေ။မြန်မာနိုင်ငံ၏ တက္ကစီငှားယမ်းမှုတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုဆိုသည်မှာ? →